ကိုယ့်ရဲ့ကားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိထားရင် မမှားတဲ့ အချက်များ
မိတ်ဆွေဆီမှာ ကားတစ်စီး ရှိမယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ရေးထားတာတွေ ဖတ်ကြည့်လိုက်ဦးနော်...
ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကားတစ်စီးရဲ့ အရှေ့မီးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း မှုန်ဝါးဝါးဖြစ်လာတတ်တယ်။ ဒါဟာ နေဒဏ်၊ မိုးဒဏ်၊ ဖုန်ဒဏ်တွေကြောင့်ပါ။ အဲဒါကို အသစ်အတိုင်း ပြောင်လက်သွားစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ နူးညံသန့်ရှင်းတဲ့ အဝတ်တစ်စပါပဲ။ ပွတ်တိုက်ပြီး ရေနဲ့ဆေးပေးလိုက်ရင် အသစ်နီးပါး ကြည်လင်တောက်ပသွားပြီ။
ပုံမှန်အားဖြင့် ကားတစ်စီးမှာ နောက်ဘက်ကိုကြည့်ဖို့ မှန် ၃ ခု ပါ ပါတယ်။ ကားအတွင်းက အလယ်မှန်ကတော့ နောက်တည့်တည့်ကို ကြည့်တာမလို့ ရှင်းပါတယ်။ မရှင်းတာက ဘယ်/ညာ နောက်ဘက်ကိုကြည့်တဲ့ ဘေးမှန်နှစ်ချပ်ရယ်။ ဘေးမှန်နှစ်ချပ်ကို အများသူငါတွေချိန်တဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ကားဘေးဘက်ခြမ်းကိုပါ အနည်းငယ်မြင်အောင်ချိန်ထားတာမျိုးဆိုရင် blind spot လို့ခေါ်တဲ့ မမြင်ရတဲ့ နေရာရှိနေတတ်လို့ပါ။ အဲဒီလိုချိန်ထားတာမျိုးက ကိုယ့်ကားအနောက် ဘယ်/ညာ ကလာတဲ့ကားရဲ့ရှေ့ဘီးဟာ ကိုယ့်ကား အနောက်ဘီးနေရာလောက်ကို ရောက်လာပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှန်တွေမှာ အဲဒီကားကို တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းကြော ပြောင်းချင်တဲ့သူတွေအထူးသတိပြုရမှာပါ။
ဘေးမှန် ချိန်နည်းအမှန်ကတော့ မိမိကားရဲ့ နံဘေးအခြမ်းကို လွတ်ရုံကလေးချိန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် blind spot ကင်းမဲ့တဲ့ခံစားချက်ကိုရရှိမှာဖြစ်လို့ လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
တန်ဖိုးကြီးတဲ့ phone holders တွေက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တန်ဖိုးလည်းနည်း၊ အလွယ်တကူလည်း ရရှိနိုင်တဲ့ ကားပေါ်မှာ ဖုန်းချိတ်တဲ့ နည်းလမ်းကိုတော့ သိထားတာ မမှားပါဘူး။
သားရေကွင်း ခပ်မာမာ တစ်ကွင်းကို air-con အပေါက်မှာ အထက်အောက်လျှိုပြီးချိတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ပြုတ်ကျမှာ မပူရပါဘူး။
ကိုယ်မောင်းနေကျ ကားမဟုတ်ရင် အချို့နေရာတွေမှာ တိုင်တော်တော် ပတ်တတ်တယ်။ ဥပမာ၊ ဆီဖြည့်တော့မယ့်အချိန်မျိုးပေါ့။ ဆီတိုင်ကီအဖုံးက ဘယ်ဘက်မှာရှိမှန်း ကားပေါ်ကနေ ဆင်းကြည့်တဲ့သူတွေတောင် ရှိပါရဲ့။
နည်းသိရင် ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြည့်ဖို မလိုအပ်ဘူးဗျ။ ကားရဲ့ ဆီဂိတ်မှာ ဆီတိုင်ကီအဖုံးရှိတဲ့ဘက်ကို မြှားပြထားပါတယ်။ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
သိပ်လွယ်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းရှိပေမယ့် လိုက်မလုပ်မိကြဘူး။ ကားပါကင်ကြီးတွေမှာ ပါကင်ထိုးပြီး ကားပေါ်ကဆင်းတဲ့အချိန် မှတ်မိလွယ်အောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်ဖို့ပဲလိုတာပါ။
မှန်အတွင်းမှာ ကပ်ထားတဲ့ စတစ်ကာတွေကို ခွာမယ်ဆိုရင် အချို့ဟာတွေက လွယ်ပေမယ့် အချို့ကတော့ ခက်ခဲပြီး ကော်သားနဲ့၊ စတစ်ကာသားအချို့ ကျန်နေတတ်ပါတယ်။
သတင်းစာစက္ကူကို ရေနွေးထဲမှာစိမ်။ ပြီးရင် ခွာချင်တဲ့ စတစ်ကာပေါ်မှာ ၁ဝ မိနစ်လောက် ကပ်ထားပေးလိုက်။ ကြိုက်တဲ့ စတစ်ကာလာ၊ အကြွင်းအကျန်မရှိ လွယ်လွယ်ကူကူ ခွာလိုက်ပေတော့။
၇။ ** Air-con မသုံးဘဲပူနေတဲ့ကားကိုအမြန်အေးအောင်**
ကိုယ်တွေလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ အမြဲတမ်းကြုံနေရအခြေအနေပါ။ နေပူထဲမှာ ကားကို ရပ်ထားခဲ့ရပြီး အတွင်းခန်း အရမ်းပူနေတာမျိုးပေါ့။ အဲဒီအခြေအနေမှာ air-con ကို သုံးဖို့ဆိုရင်တောင်မှ အပူခံပြီး ကားထဲဝင်နေရဦးမှာပါ။
ဒီလိုအဖြစ်တွေကို ကျော်လွန်စေဖို့ တစ်ဘက်မှာ မှန်တစ်ခြပ်ကို အရင်ချလိုက်ပါ။ ပြီးရင်နောက်တစ်ဘက်ကနေပြီး တံခါးကို ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် ၅ ခါလောက်လုပ်လိုက်။ လေပူတွေက အဖွင့်အပိတ်လုပ်တဲ့ တံခါးက ထွက်သွားပြီး လေအေးတွေက ဖွင့်ထားတဲ့ မှန်ပေါက်က ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။
လေကာမှန်အက်သွားရင် ဘာလုပ်မလဲ? အက်ကြောင်းဆိုတာမျိုးက တဖြည်းဖြည်း လိုက်လိုက်ပြီး ရှည်လာတတ်တာမျိုး။ မှန်ကြောသွားသတ်မလား။ အသတ်မတော်ရင် အက်ရာကလည်းလိုက်၊ သတ်ရာကလည်းအက်ပြီး အက်ကြောင်းတွေ အများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဆေးထိုးမလား။ တစ်ချို့နေရာတွေဆိုထိုးလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ၊ မှန်အတွင်းဘက်က အက်တာမျိုး။
ဈေးပေါပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို ပြောပြပါရစေ။ လက်သည်းနီ အကြည်ရောင်ကို ဝယ်ပြီး အက်ကြောင်းတစ်လျှောက် သေသေချာချာလေး ဆိုးပေးပါလေ။ အထူးသဖြင့်တော့ အက်ကြောင်းရဲ့ ထိပ်နှစ်ဘက်ကိုပေါ့။ ပြီးရင် နေပူလှမ်းပေး။ အက်ကြောင်းလိုက်ပြီး ထပ်ရှည်လာတဲ့အချိန် ပိုကြာလာပါလိမ့်မယ်။
၉။ ကား ရီမုတ်ရဲ့ အကွာအဝေးကို ပိုတိုးစေချင်ရင်
ကားကို ရီမုတ်နဲ့ သော့အဖွင့်အပိတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ အကွာအဝေးကို ပိုတိုးစေချင်ရင် ရီမုတ်ကို မေးစေ့နဲ့ နှာခေါင်းအကြားနားမှာ ထားပြီးလုပ်ပါ။ သိသိသာသာ တိုးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် မရတဲ့အကွာအဝေးမှာ မေးစေ့နားကပ်ပြီး လုပ်ရင် ရလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ ဦးခေါင်းထဲက အရည်တွေရဲ့ လုံလောက်တဲ့ ညွှန်ပြမှုကြောင့်ပါလို့ ဆိုကြတဲ့အတွက် အမြဲတမ်းတော့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ အကြံပေးပါရစေ။
ကိုယျ့ရဲ့လကျထဲမှာ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ကားတဈစီးရဲ့ အရှေ့မီးတှဟော တဖွညျးဖွညျး မှုနျဝါးဝါးဖွဈလာတတျတယျ။ ဒါဟာ နဒေဏျ၊ မိုးဒဏျ၊ ဖုနျဒဏျတှကွောငျ့ပါ။ အဲဒါကို အသဈအတိုငျး ပွောငျလကျသှားစမေယျ့ အကောငျးဆုံးနညျးကတော့ သှားတိုကျဆေးနဲ့ နူးညံသနျ့ရှငျးတဲ့ အဝတျတဈစပါပဲ။ ပှတျတိုကျပွီး ရနေဲ့ဆေးပေးလိုကျရငျ အသဈနီးပါး ကွညျလငျတောကျပသှားပွီ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ ကားတဈစီးမှာ နောကျဘကျကိုကွညျ့ဖို့ မှနျ ၃ ခု ပါ ပါတယျ။ ကားအတှငျးက အလယျမှနျကတော့ နောကျတညျ့တညျ့ကို ကွညျ့တာမလို့ ရှငျးပါတယျ။ မရှငျးတာက ဘယျ/ညာ နောကျဘကျကိုကွညျ့တဲ့ ဘေးမှနျနှဈခပျြရယျ။ ဘေးမှနျနှဈခပျြကို အမြားသူငါတှခြေိနျတဲ့အတိုငျး ကိုယျ့ကားဘေးဘကျခွမျးကိုပါ အနညျးငယျမွငျအောငျခြိနျထားတာမြိုးဆိုရငျ blind spot လို့ချေါတဲ့ မမွငျရတဲ့ နရောရှိနတေတျလို့ပါ။ အဲဒီလိုခြိနျထားတာမြိုးက ကိုယျ့ကားအနောကျ ဘယျ/ညာ ကလာတဲ့ကားရဲ့ရှေ့ဘီးဟာ ကိုယျ့ကား အနောကျဘီးနရောလောကျကို ရောကျလာပွီဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ဘေးမှနျတှမှော အဲဒီကားကို တှေ့ရမှာ မဟုတျပါဘူး။ လမျးကွော ပွောငျးခငျြတဲ့သူတှအေထူးသတိပွုရမှာပါ။
ဘေးမှနျ ခြိနျနညျးအမှနျကတော့ မိမိကားရဲ့ နံဘေးအခွမျးကို လှတျရုံကလေးခြိနျရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ blind spot ကငျးမဲ့တဲ့ခံစားခကျြကိုရရှိမှာဖွဈလို့ လကျတှေ့စမျးသပျကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
တနျဖိုးကွီးတဲ့ phone holders တှကေ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တနျဖိုးလညျးနညျး၊ အလှယျတကူလညျး ရရှိနိုငျတဲ့ ကားပျေါမှာ ဖုနျးခြိတျတဲ့ နညျးလမျးကိုတော့ သိထားတာ မမှားပါဘူး။
သားရကှေငျး ခပျမာမာ တဈကှငျးကို air-con အပေါကျမှာ အထကျအောကျလြှိုပွီးခြိတျလိုကျရုံပါပဲ။ ပွုတျကမြှာ မပူရပါဘူး။
ကိုယျမောငျးနကြေ ကားမဟုတျရငျ အခြို့နရောတှမှော တိုငျတျောတျော ပတျတတျတယျ။ ဥပမာ၊ ဆီဖွညျ့တော့မယျ့အခြိနျမြိုးပေါ့။ ဆီတိုငျကီအဖုံးက ဘယျဘကျမှာရှိမှနျး ကားပျေါကနေ ဆငျးကွညျ့တဲ့သူတှတောငျ ရှိပါရဲ့။
နညျးသိရငျ ကိုယျတိုငျဆငျးကွညျ့ဖို မလိုအပျဘူးဗြ။ ကားရဲ့ ဆီဂိတျမှာ ဆီတိုငျကီအဖုံးရှိတဲ့ဘကျကို မွှားပွထားပါတယျ။ တဈခကျြကွညျ့လိုကျရုံပါပဲ။
သိပျလှယျတဲ့ဖွရှေငျးနညျးရှိပမေယျ့ လိုကျမလုပျမိကွဘူး။ ကားပါကငျကွီးတှမှော ပါကငျထိုးပွီး ကားပျေါကဆငျးတဲ့အခြိနျ မှတျမိလှယျအောငျ ဓါတျပုံရိုကျထားလိုကျဖို့ပဲလိုတာပါ။
မှနျအတှငျးမှာ ကပျထားတဲ့ စတဈကာတှကေို ခှာမယျဆိုရငျ အခြို့ဟာတှကေ လှယျပမေယျ့ အခြို့ကတော့ ခကျခဲပွီး ကျောသားနဲ့၊ စတဈကာသားအခြို့ ကနျြနတေတျပါတယျ။
သတငျးစာစက်ကူကို ရနှေးထဲမှာစိမျ။ ပွီးရငျ ခှာခငျြတဲ့ စတဈကာပျေါမှာ ၁ဝ မိနဈလောကျ ကပျထားပေးလိုကျ။ ကွိုကျတဲ့ စတဈကာလာ၊ အကွှငျးအကနျြမရှိ လှယျလှယျကူကူ ခှာလိုကျပတော့။
၇။ ** Air-con မသုံးဘဲပူနတေဲ့ကားကိုအမွနျအေးအောငျ**
ကိုယျတှလေိုနိုငျငံမြိုးမှာ အမွဲတမျးကွုံနရေအခွအေနပေါ။ နပေူထဲမှာ ကားကို ရပျထားခဲ့ရပွီး အတှငျးခနျး အရမျးပူနတောမြိုးပေါ့။ အဲဒီအခွအေနမှော air-con ကို သုံးဖို့ဆိုရငျတောငျမှ အပူခံပွီး ကားထဲဝငျနရေဦးမှာပါ။
ဒီလိုအဖွဈတှကေို ကျြောလှနျစဖေို့ တဈဘကျမှာ မှနျတဈခွပျကို အရငျခလြိုကျပါ။ ပွီးရငျနောကျတဈဘကျကနပွေီး တံခါးကို ဖှငျ့လိုကျပိတျလိုကျ ၅ ခါလောကျလုပျလိုကျ။ လပေူတှကေ အဖှငျ့အပိတျလုပျတဲ့ တံခါးက ထှကျသှားပွီး လအေးတှကေ ဖှငျ့ထားတဲ့ မှနျပေါကျက ဝငျလာပါလိမျ့မယျ။
လကောမှနျအကျသှားရငျ ဘာလုပျမလဲ? အကျကွောငျးဆိုတာမြိုးက တဖွညျးဖွညျး လိုကျလိုကျပွီး ရှညျလာတတျတာမြိုး။ မှနျကွောသှားသတျမလား။ အသတျမတျောရငျ အကျရာကလညျးလိုကျ၊ သတျရာကလညျးအကျပွီး အကျကွောငျးတှေ အမြားကွီးဖွဈသှားနိုငျတယျ။ ဆေးထိုးမလား။ တဈခြို့နရောတှဆေိုထိုးလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ၊ မှနျအတှငျးဘကျက အကျတာမြိုး။
ဈေးပေါပွီး ကိုယျတိုငျလုပျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတဈခုကို ပွောပွပါရစေ။ လကျသညျးနီ အကွညျရောငျကို ဝယျပွီး အကျကွောငျးတဈလြှောကျ သသေခြောခြာလေး ဆိုးပေးပါလေ။ အထူးသဖွငျ့တော့ အကျကွောငျးရဲ့ ထိပျနှဈဘကျကိုပေါ့။ ပွီးရငျ နပေူလှမျးပေး။ အကျကွောငျးလိုကျပွီး ထပျရှညျလာတဲ့အခြိနျ ပိုကွာလာပါလိမျ့မယျ။
၉။ ကား ရီမုတျရဲ့ အကှာအဝေးကို ပိုတိုးစခေငျြရငျ
ကားကို ရီမုတျနဲ့ သော့အဖှငျ့အပိတျလုပျတဲ့အခါမှာ အကှာအဝေးကို ပိုတိုးစခေငျြရငျ ရီမုတျကို မေးစေ့နဲ့ နှာခေါငျးအကွားနားမှာ ထားပွီးလုပျပါ။ သိသိသာသာ တိုးလာတာကိုတှေ့ရပါလိမျ့မယျ။ ပွောရမယျဆိုရငျ ပုံမှနျအတိုငျးဆိုရငျ မရတဲ့အကှာအဝေးမှာ မေးစေ့နားကပျပွီး လုပျရငျ ရလာတာကို တှေ့ရပါလိမျ့မယျ။
ဒါဟာ ဦးခေါငျးထဲက အရညျတှရေဲ့ လုံလောကျတဲ့ ညှနျပွမှုကွောငျ့ပါလို့ ဆိုကွတဲ့အတှကျ အမွဲတမျးတော့ မလုပျသငျ့ဘူးလို့ အကွံပေးပါရစေ။
ဖောက်စွပ်၊ အလုံးချိန်း၊ အခွံချိန်း ပြောင်းလဲကားများ RTA ဒဏ်ကြေးဖြင့် လုံးဝခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံပိုင်အဖြစ် သိမ်းဆည်းမည်
ကနဦးမှတ်ပုံတင်ထားသော ရုပ်ပြောင်းကားများကို အရေးယူမည်မဟုတ်ဘဲ အသစ်သွင်းလာသော ရုပ်ပြောင်းကားများကိုသာ catalog ပါအတိုင်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးမည်